तपाईंको अमेजन उत्पादहरू राम्रोसँग कसरी खरिद गर्ने?
यदि तपाईं 2018 मा अमेजनमा बेच्ने कुरा के हो भने, यो लेख तपाईंको लागि रोचक हुनेछ. यहाँ हामी अमेजनमा सफलता को रहस्य मा छलफल गर्नेछौं र वस्तुहरू जसले तपाईंलाई लाभ उठाउनेछ. यसबाहेक, हामी सामान्य गल्तीहरूबाट बच्न मद्दत गर्न अमेजनमा बेचन गर्न आधारभूत समस्याहरू मार्फत जानेछौं.
अमेजन मा बेचने को लागि उत्पादनहरु को प्रतिज्ञा को कसरि अनुसन्धान गर्ने?
तपाईंको अमेजन व्यापार विकासको निचला रेखामा, तपाइँलाई उत्पादनहरू खोज्न आवश्यक छ जुन सम्भावनात्मक र राम्रो खरिद हुने सम्भव छ।. यो एक धेरै जिम्मेदार कदम हो जुन तपाईंको समय र प्रयास चाहिन्छ. सौभाग्य देखि, अमेजनले तपाइँलाई सुरु गर्नु आवश्यक डाटा को धेरै दिन्छ.
तपाईंले गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा भनेको के हो कि यो विक्रेता वा विक्रेताको लागि तपाईंको लागि लाभदायक बनाउँछ. तपाईं यो पहल को माध्यम ले शिपिंग लागत, बजार आला प्रतिस्पर्धा, श्रेणी को लोकप्रियता र यस वर्ग को उत्पादनहरु तिर ग्राहक को व्यवहार को रूप मा जाना चाहिए. तपाईंको छनोटले निम्न मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्छ.
निम्न योग्य र शाप्य कारकहरूले तपाईंलाई सही उत्पादन छनोट गर्न मद्दत गर्नेछ:
लागत तपाईंको लक्षित बिक्री मूल्यको 35% सम्म हुनेछ;
लक्ष्य बिक्री मूल्य $ 10- $ 50 को बीच;
समस्याग्रस्त शिपिंग को सामान को हल्के वजन को कारण (2-3 एलबीएस). अधिकतम);
यो तपाईंको वस्तु अयोग्य र सजिलो गर्न सजिलो हुने हो कि यो राम्रो छ;
मौसमी वा छुट्टै विशेष उत्पादहरूबाट बचाउनका लागि उनीहरूले तपाईंलाई सम्पूर्ण वर्ष लाभ नगर्ने;
तपाईँका उत्पादनहरू उनीहरूको उच्च गुणस्तर र विशिष्टताद्वारा फरक हुनुपर्छ.
माथि उल्लेखित कारकहरु को अतिरिक्त, तपाईंलाई जाँच गर्नु पर्छ कि वस्तु उच्च मांग मा छ कि, या अमेजन विक्रेताहरु को पक्ष मा नहीं मिलयो. तथापि, तपाईंलाई यो सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ कि एक उत्पादन धेरै प्रतिस्पर्धा छैन किनकि यसले भीडबाट बाहिर खडा गर्न तपाईँको मौका कम गर्नेछ.
केहि आवश्यक कारकहरु अमेजन मा उत्पाद को मांग को स्तर मा संकेत गर्दछ:
तपाईंले चयन गर्नुभएको उत्पादनहरु को प्रमुख अमेजन विक्रेताहरु या ठूलो निगमहरु द्वारा पुनर्स्थापित नहीं गर्नु पर्छ;
समान उत्पादनहरू 5000 को एक अमेजन सर्वोत्तम बिक्रेता र मुख्य श्रेणीमा कम छन्;
समान उत्पादन सूचीहरु प्रयोगकर्ताहरु मा लोकप्रिय छैनन्;
उत्पादन को समीक्षा को एक अनुपस्थिति;
लक्षित उत्पाद को खोजशब्दहरु लाई 100,000 भन्दा मासिक खोजों को छ.
तपाईंको बजार अनुसन्धानको दोस्रो चरणमा तपाईलाई सम्बन्धित वस्तुहरूको उत्पादन पृष्ठमा जानकारी जाँच गर्न आवश्यक छ।. उत्पादन सूचीले तपाईंलाई उत्पादनको गुणस्तर र फाइदाको बारेमा धेरै बताउन सक्छ. जब अमेजनको उत्पाद पृष्ठ खुल्ला हुन्छ, मूल्य, ढुवानी लागत, उत्पाद आयाम, ढुवानीको वजन, र अमेजन सर्वोत्तम विक्रेतालाई ध्यान दिनुहोस्. औसत ग्राहक समीक्षा र तारा मूल्याङ्कनमा विशेष ध्यान दिइनेछ. उत्पाद समीक्षाहरूको संख्या र गुणस्तरको वस्तु र त्यसको लोकप्रियतामा प्रयोगकर्ताको प्रतिक्रिया देखाउँदछ.
अमेजन बेस्ट बिक्रेताहरूले तपाईलाई बुद्धिमानी छनौट गर्न कसरी मद्दत गर्न सक्छन्?
Amazon बेस्ट विक्रेता रैंक सबै श्रेणियों मा TOP 100 बिक्रेता वस्तुहरु को एक सूची हो. यस रैंकिङ सूची दैनिक आधारमा भिन्न हुन सक्छ. यदि तपाईं अमेजनमा बेचन गर्न मूल्यवान वस्तुहरू चयन गर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ भने, यस खण्ड तपाईलाई हेर्नको लागि रोचक हुनेछ. यस पृष्ठबाट, तपाईं अन्य 100 र उपश्रेणीका लागि सर्वश्रेष्ठ 100 उत्तम बिक्रेताहरूमा ड्रिल गर्न सक्नुहुन्छ. यो डेटा तपाईंको उत्पादन अनुसन्धान प्रक्रियाको लागि बहुमूल्य हुन सक्छ.
Amazon मार्फत खोजी गर्नु उत्तम बेस्ट बिक्रेता सूची, तपाईंलाई निम्नलिखित कोटिहरूमा एक उच्चारण गर्न आवश्यक छ:
हट नयाँ रिलीज
यो खण्डले अन्तिम समयको लागि लोकप्रिय र राम्रो खरिद भएको प्रचलन उत्पादनहरू देखाउँछ. यो डेटा अमेजन उत्पाद सूचीबद्ध शोधकर्ताहरू र विश्लेषणमा आधारित छन्. यहाँ तपाइँ विशेष श्रेणी र उपश्रेणीहरूमा हट नयाँ विज्ञप्ति हेर्न ड्रिल गर्न सक्नुहुन्छ. होशियार हुनुहोस् कि यो डेटा समय संग परिवर्तन गर्न सकिन्छ.
मूवर्स र शिकर्स
. नियमको रूपमा, यसमा तातो प्रवृत्तहरू र मौसमी बिक्रीहरू समावेश छन्. यी विशेष उत्पादहरु को ध्यान को रूप मा उनि लोकप्रिय र आशाजनक हो, तर अझै पनि अत्यधिक प्रतिस्पर्धी नहीं. यसबाहेक, यस कोटिले तातो आला वस्तुहरू फेला पार्नको लागि उपयोगी हुन सक्छ.
सबै भन्दा ज्यादा मांगी छ
यहाँ तपाईं अमेजन मा सबै भन्दा ज्यादा इच्छित उत्पादनहरु हुनेछ. अर्को शब्दमा, अमेजन विक्रेताहरूले यी वस्तुहरूलाई आफ्नो इच्छा सूचीमा बचत गर्छन्. यसले खरिदहरू संकेत गर्दैन तर अझै ग्राहक प्राथमिकताहरू देखाउँछ.
यहाँ तपाई त्यस्ता वस्तुहरू देख्न सक्नुहुन्छ कि अमेजन विक्रेताहरू उपहारहरू खरीद गर्न जाँदैछन्।. धेरै मौसमी र ​​छुट्टै सम्बन्धित वस्तुहरु को लागि आला श्रेणिहरु भित्र सर्वश्रेष्ठ विक्रेताहरु को लागी यो एक राम्रो सूचक हो.
अमेजन मा बेचने को सामान्य समस्या
विक्रेताहरूले आफ्नो पैसा केवल धेरै हफ्तों को भित्र प्राप्त गर्न सक्छन्
यदि तपाईं अमेजनमा आफ्नो उत्पादन बेच्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई अमेजन बिक्रेता वा विक्रेता केन्द्रका आवश्यकताहरू पछ्याउन आवश्यक छ. तिनीहरूको अनुसार, एक भुक्तानी तपाईंको चेक खातामा हरेक 14 दिन प्रत्यक्ष डिपो द्वारा गर्न सकिन्छ. त्यहाँ अमेजनमा प्रयोग गर्न सक्ने अन्य भुक्तानी प्रणालीहरू छैनन्. तपाईंको व्यापार रणनीति योजना बनाउँदा तपाईंलाई यो मुद्दामा ध्यान दिन आवश्यक छ. उदाहरणका लागि, यदि तपाईंले बिक्री गर्न नयाँ उत्पादनहरू खरिद गर्न आफ्नो बिक्रीबाट राजस्व प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, यो तपाइँको व्यवसायको लागि ठुलो ब्लक हुन सक्छ।.
बाधाहरु लाई प्रवेश
यिनी दिनों मा, यो एक अमेजन विक्रेता बनने को लागी यो आसान छैन. त्यहाँ धेरै बिक्रेताहरू जसले अमेजन नियमहरू ब्रेक गर्छन् र प्लेटफर्ममा लाभ नगर्ने छन्. यसैले अमेजनले प्लेटफर्ममा आफ्नो सामान बेच्न अनुमति दिन अनुमति दिएका छन्. बिक्रेताहरू जसले खुदरा कपडाहरू, जूताहरू, मोटर वाहन वस्तुहरू र महँगी सूचीहरूको अन्य प्रकारहरू चाहन्छ, अमेजनबाट अनुमोदन प्राप्त गर्न आवश्यक छ।.
को निर्माणमा कठिनाइहरूको सामना गर्नेछ तपाई अमेजनमा उच्च श्रेणीको लागि पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न एक लामो र सकारात्मक बिक्री इतिहास हुनुपर्दछ। SERP. यसबाहेक, प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रोत्साहित गर्न निषेध गरिएको छ कि तपाइँका उत्पादनहरूमा प्रतिक्रिया छोड्नुहोस्. यदि अमेजनले सूचित गर्दछ कि तपाईंको प्रतिक्रियाहरू जैविक छैन, सबै तिनीहरू हटाइने छन् र तपाइँले आफ्नो स्तर गुमाउनुहुनेछ Source .